Fitantanam-pitondrana · Avrily, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Fitantanam-pitondrana · Avrily, 2010
Tantara mikasika ny Fitantanam-pitondrana tamin'ny Avrily, 2010
“Boobquake” – “Horohoron”-’ny nofo miatrika ny fitakian’ny mpitarika fivavahana iraniana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 30 Avrily 2010
Mpianatra iray any amin'ny Anjerimanontolon'i Purdue any Etazonia no nangataka ny vehivavy eran-tany mba hanao fitafiana mihanjahanja na mampiseho kely ny lohaliny ny andro alatsinainy, ho toy ny andrana hanihany ihany mba hanaporofoana ny tsy maha-marimpototra ny fombam-pivavahana iraniana izay milaza fa ny fanaovana akanjo tsy maotina dia miteraka horohoron-tany.
Polonina 22 Avrily 2010
Sylwia Presley dia mitatitra fa samy nanova ny loko lafiky ny tranonkalany lokon-davenona, mainty ary fotsy ny vavahadin'izy ireo avy ireo mpilaza vaovao amin'ny aterineto, ireo mpilaza vaovao ara-tsosialy, ireo tranonkalan'ny governemanta ary ny vavahadin'ny tranonkalan'ireo fikambanana Poloney erak'izao tontolo izao koa dia mba nanova ny loko lafiky ny tranonkalany lokon-davenona, mainty ary fotsy ho fanehoan'izy ireo ny fiaraha-miory amin'ny firenena.
Iran: Nihen-danja ve ny fitorahana blaogy hatramin'ny fifidianana filoham-pirenena?
Iràna 19 Avrily 2010
Moa nanova ny fampiasana ireo fantsona sy fitaovana median'olon-tsotra ve ny fifidianana filoham-pirenena Iraniana? Iraniana iraikambinifolo mpitoraka blaogy sy matihanina amin'ny fampahalalam-baovao mahasolotena ny firehana politika rehetra no namaly ny andiam-panontaniana mikasika ny fivoaran'ny fampahalalam-baovao avy amin'ny Iraniana olon-tsotra Iran hatramin’ny fifidianana.
Madagasikara: Fanonganam-panjakana misesisesy rehefa mihamanakaiky ny fifampiraharahana
Afrika Mainty 18 Avrily 2010
Taorian'ny fanesorana tamin'ny toerany ny minisitry ny foloalindahy tamin'ny 7 Avril noho ny fiampangana azy ho nikasa hanongam-panjakana, manontany i Achille52 hoe inona indray ny dikan'ity filazana ho nisiana fanonganam-panjakana hafa ny andron'ny 18 avrily ity sy ny fisamborana maro nanaraka azy (fr). Ny mampiahiahy azy indrindra dia ny fotoana fisian'ny...
Polonina: 10 aprily 2010 Sabotsy mainty, Andro fisaonana
Polonina 17 Avrily 2010
Satria isika mbola mamakivaky tanteraka ao anatin’ny 24 ora voalohany amin'ny fangirifirian’ny firenena Poloney, maneho hevitra mikasika ny zava-nitranga io maraina io ireo fampahalalam-baovao ara-sosialy isan-karazany, raha namoy ny Filoham-pireneny sy olo-manan-kaja hafa miisa 95 i Polona.
Qatar: Manohitra ny politika vaovao mikasika ny fahazoan-dàlana raisina eo am-pahatongavana ireo mpiasa mpifindra monina
Amerika Avaratra 16 Avrily 2010
Manankery manomboka ny 1 May, Qatar dia miomana hanafoana ny fahazoan-dàlana alaina eo am-pahatongavana ho ana firenena ampolony maro mampiasa io fomba io. Sorena ireo mpiasa mpifindra monina mieritreritra ny amin'ny fianakavian'izy ireo ary milaza sahady fa mety hanimba ny reska fizahantany ao amin'ity firenena kely ao amin'i Gulf ity io.
Poland: Fihetsika amin'ny horonantsary taorian'ny fahafatesana noho ny fianjeran'ny fiaramanidina
Polonina 12 Avrily 2010
Taorian'ny vaovao mampalahelo tamin'ny nahalasanan'ny Filoha Lech Kaczyński sy manamboninahitra 95 hafa, manomboka herinandro fisaonana amin'ny fomba ofisialy i Poland. Ankoatry ny habetsahan'ny fihetsika tamina toerana isan-karazany amin'ny aterineto, ireo hafatra amin'ny horonantsary koa dia fitaovana iray matanjaka anehoana ny fihetsehampon'ny firenena manontolo.
Polonina: Maty tamin'ny fianjerana voromby tany Rosia ny filoha Kaczyński – Fihetsika voalohany
Polonina 10 Avrily 2010
Nahatratra ny tontolon'ny bolongana iray manontolo, ka hatrany amin'ny gazety malaza ankehitriny ny vaovao nianjeran'ny voromby nitondra ka nahafaty ny filoha Lech Kaczyński sy ny vadiny ary ireo tompon'andraiki-panjakana ambony tany andrefan'i Rosia androany maraina. Nizotra ho any Katyn ny filoha, handray anjara tamin'ny fotoam-pahatsiarovana ny fandripahana tao ana'alan'i Katyn nandritra...
Rosia: Eritreritra manodidina ny politika sy baomba nipoaka t@ metro
Eoropa Afovoany & Atsinanana 05 Avrily 2010
Herinandro izay no lasa taorian'ireo baomba nipoaka tamin'ny 29 Marsa tany amin'ny metrô-n'i Moskoa, izay nahafatesana olona 40 sy naharatrana olona mihoatra ny 100. Indreto apetraka eto ambany eto ny singa vitsivitsy amin'izay adihevitra ataon'ny mpamaham-bolongana miteny Rosiana amin'izao fotoana izao. mpampiasa ny LJ matiutia no nanoratra (RUS) momba ny fifanenana...
Amerika Latina 02 Avrily 2010